Afrika, 01 February 2018
Kenya oo Mamnuucday Dhaq-dhaqaaqa Wax-iska-caabinta
Waxa maalintii labaad hawada ka maqan warbaahinta la iska arko ee ugu waawayn dalkan Kenya, kadib markii ay dowladda Kenya hawada kasaartay.
Raila Odinga oo loo Dhaariyey "Madaxweynimo"
Kummaan taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga, ayaa maanta isugu yimid magaalada Nayroobi, halkaas oo ay ku caleemo saareen Raila in uu noqdo madaxweynaha sacabka Kenya.
Tahriibayaal ku Dhintay Xeebaha Yemen
Hay’addaha Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ayaa maanta oo Jimce ah sheegay in 30 qof oo muhaajirin ah oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ah ay qaraqmeen, kadib markii dooni ay ka soo raaceen Yemen ay ku dagtay xeebaha Yemen.
Wasiirrada A. Dibadda Afrika oo Cambaareyay Trump
Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaa maanta ka furmay shir laba maalmood soconaya oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Midowga Afrika.
Filim Laga Sameeyay Weerar Shabaab ay Geysteen oo Abaal Marin u Sharraxan
Filim uu soo saaray arday u dhashay dalka Jarmalka oo ku saabsan weerar lagu qaaday bas mararay Mandheera gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, sanado ka hor, ayaa u sharaxan abaal marinta loo yaqaan Oscar award.
Kenya: Iskuullo u Xirmay Falal Amni Darteed oo Dib Loo Furayo
Wasaarada amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in dib loo furi doono 5 iskuul oo ku kala yaalla tulooyin ku teedsan xudduudda dalkaasi la leeyahay Soomaaliya, kadib muddo 5 sano oo ay xirnaayeen cabsi dhinaca amniga ah.
Shirka Ciidamada Heyganka ee Bariga Afrika oo Jabuuti lagu Soo Gunaanuday
Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gaba-gabeeyya shirkii 23-aad ee ururka ISAF, ee ciidamada heyganka ee dalalka Bariga Afrika.
Maxkamadda Sare ee Kenya oo Hakisay Mamnuucista Safarada Habeenkii ee Gawaarida Waaweyn
Maxamadda sare ee dalka Kenya ayaa si kumeel gaar ah u hor istaagtay inuu dhaqangalo go'aankii baabuurta waaweyn ee basaska looga mamnuucay inay habeenka safarada dhaadheer ee magaalooyinka galaan.
Masar iyo Itoobiya oo ka Wada Hadlaya Arrinta Wabiga Nile
Ra'isul wasaaraha Itoobiya,Hailemariam Desalegn, ayaa booqasho laba maalin qaadaneysa ku tagey magaalada Qaahira ee dalka Masar, Arbacadii shalay.